कश्मीरको अवस्था बुझ्न गएका राहुल गान्धी र अन्य विपक्षी नेतालाई श्रीनगरको विमानस्थलबाटै फर्काइयो | Ratopati
एजेन्सी । भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस नेता राहुल गान्धी र भारतका आठ विपक्षी दलका ११ नेतासँग शनिबार श्रीनगर पुगेका थिए । तर प्रशासनले तिनलाई विमानस्थलबाट बाहिर निस्कन अनुमति दिइएन । केही समयको विवादपछि उनीहरुलाई विमानस्थलबाटै दिल्ली फकाईएको थियो ।
को–को थिए भ्रमणमा ?
कंग्रेस सांसद गलाम नबी आजादले यसअघि पनि कश्मीर प्रवेश गर्ने प्रयास गरेका थिए । उनलाई दुई पटकसम्म रोकिएको थियो । डी. राजालाई पनि पहिले श्रीनगर विमानस्थलबाट फिर्ता गरिएको थियो ।
कश्मीरका राज्यपालले दिएका थिए राहुललाई निमन्त्रणा